Yohane 6 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
6 Emva kwezi zinto uYesu wemka waya phesheya kolwandle lwaseGalili, okanye lwaseTibheriya.+ 2 Wayelandelwa sisihlwele esikhulu, kuba sasiyibona imiqondiso awayeyenza kwabo babegula.+ 3 Ngoko uYesu wenyukela entabeni,+ waza wahlala nabafundi bakhe apho. 4 Ke kaloku ipasika,+ umthendeleko wamaYuda, yayikufuphi. 5 Ke ngoko, uYesu, akuphakamisa amehlo akhe waza wabona isihlwele esikhulu sisiza kuye, wathi kuFilipu: “Siya kuzithenga phi na izonka ukuze aba badle?”+ 6 Noko ke, wayekutsho oku emvavanya, kuba wayekwazi oko wayesele eza kukwenza. 7 UFilipu wamphendula wathi: “Izonka ezixabisa amakhulu amabini eedenariyo azinakubanela, ukuze ngamnye afumane intwana.”+ 8 Omnye wabafundi bakhe, uAndreya umntakwabo Simon Petros, wathi kuye: 9 “Kukho inkwenkwana apha enezonka ezihlanu zerhasi+ neentlanzi ezimbini ezincinane. Kodwa ziyintoni na ezi phakathi kwabaninzi kangaka?”+ 10 UYesu wathi: “Bangqendeviseni abantu njengasesidlweni.”+ Ke kaloku kwakukho ingca eninzi kuloo ndawo. Angqendeva ke ngoko amadoda, emalunga namawaka amahlanu ngenani.+ 11 Ngoko uYesu wazithabatha izonka waza, emva kokubulela, wazabela abo babengqendevile, kwangokunjalo neentlanzi ezincinane kangangoko babefuna.+ 12 Kodwa bakuhlutha+ wathi kubafundi bakhe: “Hlanganiselani ndawonye amaqhekeza aseleyo, ukuze kungabikho nto ichithwayo.” 13 Ngoko ke bawahlanganisela ndawonye, baza bazalisa iingobozi ezilishumi elinesibini ngamaqhekeza aphuma kwizonka ezihlanu zerhasi, awayesele kwabo babetyile.+ 14 Ngoko ke abantu bakubona imiqondiso ayenzileyo, bathi: “Lo ngokuqinisekileyo ngumprofeti+ owayeza kuza ehlabathini.” 15 Ngoko ke uYesu, esazi ukuba babesele beza kuza, bambambe bamenze ukumkani, wemka+ kwakhona waya entabeni eyedwa. 16 Kwathi kwakuhlwa, abafundi bakhe behlela elwandle,+ 17 baza, bekhwele isikhephe, banduluka besiya phesheya kolwandle eKapernahum. Kwaba mnyama uYesu engekafiki kubo. 18 Ulwandle lwalusilwa ngenxa yokuba kwakuvuthuza+ umoya onamandla. 19 Noko ke, bakuba bebheqe malunga neekhilomitha ezintlanu okanye ezintandathu, bambona uYesu ehamba phezu kolwandle, esondela ngasesikhepheni; baza boyika.+ 20 Kodwa wathi kubo: “Ndim; musani ukoyika!”+ 21 Ngoko ke bavuma ukumkhwelisa esikhepheni, yaye kungekudala isikhephe sasikumhlaba ababezama ukuya kuwo.+ 22 Ngemini elandelayo isihlwele esasimi ngaphesheya kolwandle sabona ukuba kwakungekho sikhephe apho ngaphandle kwesincinane, nokuba uYesu wayengangenanga kunye nabafundi bakhe esikhepheni kodwa ngabafundi bakhe kuphela abemkayo; 23 kodwa izikhephe ezivela eTibheriya zafika kufuphi nendawo apho babedlele khona isonka emva kokuba iNkosi ibulele. 24 Ngoko isihlwele, sakubona ukuba uYesu akakho apho bengekho nabafundi bakhe, sakhwela izikhephe zaso ezincinane saya eKapernahum ukuya kufuna+ uYesu. 25 Ngoko sakumfumana phesheya kolwandle sathi kuye: “Rabhi,+ ufike nini apha?” 26 UYesu wasiphendula waza wathi: “Inene, inene, ndithi kuni, Nindifuna, kungekhona ngenxa yokuba nabona imiqondiso, kodwa ngenxa yokuba nadla ezonkeni naza nanela.+ 27 Sebenzelani, kungekhona ukutya okutshabalalayo,+ kodwa ukutya okuhlala kuse ebomini obungunaphakade,+ aya kuninika kona uNyana womntu; kuba uBawo, uThixo kanye, ubeke kuye lo itywina lakhe lenkoliseko.”+ 28 Ngoko ke sathi kuye: “Siya kwenza ntoni na ukuze sisebenze imisebenzi kaThixo?” 29 Ekuphenduleni uYesu wathi kuso: “Nguwo lo umsebenzi kaThixo, ukuba nibonise ukholo+ kulowo uthunyiweyo Nguye.”+ 30 Ngoko ke sathi kuye: “Nguwuphi na umqondiso+ owenzayo, ukuze thina siwubone size sikukholelwe? Nguwuphi umsebenzi owenzayo? 31 Ookhokho bethu badla imana+ entlango, kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa, ‘Wabanika isonka esivela ezulwini ukuba batye.’”+ 32 Ngoko ke uYesu wathi kuso: “Inene, inene, ndithi kuni, uMoses akazange aninike isonka esivela ezulwini, kodwa uBawo uninika isonka sokwenyaniso esivela ezulwini.+ 33 Kuba isonka sikaThixo ngulowo uhla evela ezulwini aze alinike ubomi ihlabathi.” 34 Ngoko ke sathi kuye: “Nkosi, hlala usinika esi sonka.”+ 35 UYesu wathi kuso: “Ndim isonka sobomi. Lowo uza kum akayi kulamba konke konke, nalowo ubonisa ukholo kum akasayi kuze anxanwe konke konke.+ 36 Kodwa ndithe kuni, Nindibonile ukanti anikholwa.+ 37 Konke andinikayo uBawo kuya kuza kum, nalowo uza kum andisayi kuze ndimgxothe;+ 38 ngenxa yokuba ezulwini+ ndihlele ukuza kwenza, kungekhona ukuthanda kwam, kodwa ukuthanda kwalowo wandithumayo.+ 39 Kuko oku ukuthanda kwalowo wandithumayo, ukuba ndingalahlekelwa nto kuko konke oko andinike kona kodwa ndikuvuse+ ngomhla wokugqibela. 40 Kuba kuko oku ukuthanda kukaBawo, ukuba wonk’ ubani ombonayo uNyana aze abonise ukholo kuye, abe nobomi obungunaphakade,+ yaye ndiza kumvusa ngomhla wokugqibela.”+ 41 Ngoko ke amaYuda ambombozela ngenxa yokuba ethe: “Ndim isonka esehla sivela ezulwini”;+ 42 aza athi:+ “Lo asinguye na uYesu unyana kaYosefu,+ oyise nonina esibaziyo? Kwenzeka njani ke ngoku ukuba athi, ‘Ndihle ndivela ezulwini’?” 43 Ekuphenduleni uYesu wathi kuwo: “Musani ukumbombozela. 44 Akukho mntu unako ukuza kum ngaphandle kokuba uBawo, owandithumayo, amtsale;+ yaye ndiza kumvusa ngomhla wokugqibela.+ 45 Kubhaliwe ebaProfetini kwathiwa, ‘Kwaye bonke baya kufundiswa nguYehova.’+ Wonk’ ubani omvileyo uBawo waza wafunda uyeza kum.+ 46 Akukho mntu umbonileyo uBawo,+ ngaphandle kwalowo uvela kuThixo; lowo yena umbonile uBawo.+ 47 Inene, inene, ndithi kuni, Lowo ukholwayo unobomi obungunaphakade.+ 48 “Ndim isonka+ sobomi. 49 Ookhokho benu batya imana+ entlango ukanti bafa. 50 Siso esi isonka esihla sivela ezulwini, ukuze nabani na atye kuso aze angafi. 51 Ndim isonka esiphilayo esehla sivela ezulwini; ukuba nabani na utya kwesi sonka uya kuphila ngonaphakade; yaye, enyanisweni, isonka endiya kusinikela yinyama yam+ ngenxa yobomi behlabathi.”+ 52 Ngoko ke amaYuda asukuzana, esithi: “Angathini na lo mntu ukusinika inyama yakhe ukuba siyidle?” 53 Ngako oko uYesu wathi kuwo: “Inene, inene, ndithi kuni, Ngaphandle kokuba nitya inyama+ yoNyana womntu nize nisele igazi lakhe,+ aninabo ubomi+ kuni. 54 Lowo utya inyama yam aze asele igazi lam unobomi obungunaphakade, yaye ndiya kumvusa+ ngomhla wokugqibela; 55 kuba inyama yam ikukutya kokwenyaniso, negazi lam lisisiselo sokwenyaniso. 56 Lowo utya inyama yam aze asele igazi lam uhleli emanyene nam, nam ndimanyene naye.+ 57 Kanye njengoko uBawo ophilayo+ endithumile yaye nam ndiphila ngenxa kaBawo, nalowo undityayo, uya kuphila ngenxa yam.+ 58 Siso esi isonka esehla sivela ezulwini. Akukho njengaxa ookhokho benu batyayo ukanti bafa. Lowo usityayo esi sonka uya kuphila ngonaphakade.”+ 59 Ezi zinto wazitsho njengoko wayefundisa kwindibano kawonke-wonke eKapernahum. 60 Ngoko ke abaninzi kubafundi bakhe, bakukuva oku, bathi: “Le ntetho iyothusa; ngubani na onako ukuyiphulaphula?”+ 61 Kodwa uYesu, esazi ukuba abafundi bakhe babembombozela ngako oku, wathi kubo: “Kuyanikhubekisa+ na oku? 62 Nothini na, ke ngoko, nakumbona uNyana womntu enyukela apho wayekho ngaphambili?+ 63 Ngumoya onika ubomi;+ inyama ayisebenzi nto konke konke. Amazwi endiwathethileyo kuni angumoya+ yaye abubomi.+ 64 Kodwa kukho abathile kuni abangakholwayo.” Kuba ukususela ekuqaleni uYesu wayesazi ukuba ngoobani na abo babengakholwa nokuba ngubani na lowo wayeya kumngcatsha.+ 65 Ngoko wahlabela mgama wathi: “Kungenxa yoko le nto ndithe kuni, Akukho bani unokuza kum ngaphandle kokuba ukunikwe nguBawo oko.”+ 66 Ngenxa yoko abaninzi kubafundi bakhe baphindela kwizinto ezisemva+ baza ababi sahamba naye.+ 67 Ngoko ke uYesu wathi kwabalishumi elinesibini: “Ngaba nani nifuna ukumka?” 68 USimon Petros+ wamphendula wathi: “Nkosi, siya kumka siye kubani na?+ Nguwe onamazwi obomi obungunaphakade;+ 69 yaye sikholiwe saza safikelela ekwazini ukuba wena unguLowo Ungcwele kaThixo.”+ 70 UYesu wabaphendula wathi: “Ndaninyula nina balishumi elinesibini,+ akunjalo? Kanti omnye wenu ungumnyelisi.”+ 71 Enyanisweni, wayethetha ngoYudas unyana kaSimon Skariyoti; kuba yena wayeza kumngcatsha,+ nangona wayengomnye wabalishumi elinesibini.